3hp single phase mota yekutengesa, 3 hp yemagetsi mota 3450 rpm chikamu chimwe chete
3hp yemagetsi mota 3450 rpm imwe chete phase yekutengesa
3 hp magetsi emagetsi nemutengo wakanaka
3 hp magetsi emagetsi nemutengo wakanaka kubva kuChina neIndia.
3 hp mota yemagetsi chikamu chimwechete Zvakapoteredzwa Feni-Dzakatsetseka
3 hp mota yemagetsi 3450 rpm chikamu chimwe chakanyatsogadzirirwa kuveza
3 hp yemagetsi mota epurazi basa rekushandisa mune akasiyana siyana ekurima mafomu.
3 hp mota yemagetsi 1725 rpm chikamu chimwe chete, Auto Thermal Kudzivirirwa, 115 Volt, 60 Hz
About Yedu 3 hp magetsi emagetsi
Sogears yakakura mutsara weSingle Phase General Chinangwa mota dzinowanikwa muOpen Drip-proof uye TEFC yekuvaka muchikamu chimwe, chikamu chimwe chemagetsi mota. Zvakare, 3 hp mota yemagetsi 3450 rpm chikamu chimwe chakagadzirirwa kushandiswa nemuchina maturusi, mapampu, macompressor, maendesa, mafeni uye zvimwe zvinangwa. Tiri pano kuzotsigira yako yese yesimbi uye yekugadzirisa kugadzirisa kana iwe watenga kubva kwatiri. Yedu yese 7.5 hp yemagetsi mota imwechete chikamu chitsva uye hachishandiswe kana kechipiri ruoko.
Yedu 3 hp yemagetsi mota epurazi basa inowanikwa ne3-chikamu, capacitor-kutanga, kana zvachose kupatsanurwa capacitor mota dhizaini. iyo 1 Chikamu - 1740 RPM - TEFC - Rigid Mount - 180 Chimiro - Farm Duty Series 3 hp mota yemagetsi mutengo Yakavakirwa iyo Tough Yekurima Indasitiri. Iwo akanakisa seye leeson 3hp imwechete phase mota.
3 hp mota yemagetsi inotanga munzvimbo dzakasiyana dze amp nemitengo Yakakura. Chinyorwa kuwanda chengetedzo uye bhora rinotakura kuvaka kune chengetedzo uye hurefu. Zvakare ye2 hp mota yemagetsi 1725 rpm imwechete chikamu. Iko kune YL imwechete chikamu 20 hp 20 kw diki ac yemagetsi mota, Aluminium Housing, kana iwe uine hombe hombe mhinduro inodiwa. Tenga imwechete phase motors pamitengo yakanakisa muIndia kana China uye Shopu yedu ndeyemhando dzese dzenzvimbo imwechete induction mota & yemagetsi induction mota.
3 hp mota 1440 rpm, yakanaka kune chaiyo yekumhanyisa mhando mhando, kana giya rinodzora. izvo zvinoshandisa honye magiya pane akaderedzwa kupera Yakazara-Mutoro Wazvino muAmperes Imwe-Chikamu Pasiyanisa Yazvino 2 hp mota yemagetsi 1725 rpm imwechete chikamu.
Models Simba (KW) Amps havukavu EF. Fctorer Torque Torque Amps
Bata Isu Ndokumbira Kana Iwe Uine chero Mubvunzo Pane Porducts Yedu.